Dị ka a ma ama okwu, na-eru ka ọnụ ọgụgụ kasị elu bụghị ike, ma lanarị. Spotify ghọrọ ọsụ ụzọ na-ụlọ ọrụ site na-egosi onwe ya dị ka onye nke kasị mma ngwa Ọrụ music gụgharia. Na otu n'usoro nke ihe karịrị nde 30 songs na a na-akwado isi nke 60 nde, Spotify notched n'elu itie ke music ngwa. Mgbe e nwere a linear mmekọrịta dị n'etiti ọnụ ọgụgụ nke Fans na-atụ anya, ụlọ ọrụ were ọtụtụ atumatu na-ebi ndụ upto ndị, na mmepe nke Wijetị bụ otu n'ime ha. Company chọrọ ime ya ọrụ inweta ụlọ ọrụ dị ka egwu na-akpọ & ịkwụsịtụ nke music site na ibe weebụ ma ọ bụghị a ahịa, ịdị na ha listi ọkpụkpọ gafee web, na-eme enyi ha na-eso ha na artists wdg N'ihi ya, ọ bụghị nanị wijetị na APIs ndị ulo oru, ma koodu embed ha na webpage na-sụgharịrị n'ụdị iframe. A na-aga nke ọma kpọrọ ihe site ọrụ na-adịghị anya mgbe igba egbe, ọtụtụ puku web saịtị na àmà maka agakọ ha Koodu na ndị iframe na mkpado ma na-eweta play / kwụsịtụ wijetị (kasị nkịtị nke niile) ha peeji nke. Otú ọ dị, mpempe koodu e adịghị emepụta maka ọnụ / JS ma ọ bụ teknụzụ ndị ọzọ, ma mmepe emejuputa atumatu dịnụ APIs na agbakwunyere wijetị dịkwuo okporo ụzọ na ha saịtị.
Part4.Creating Artist si Page
Part 5.How na Tinye ndị a Wijetị ka nrụọrụ
Part 6.Spotify music Downloader
N'etiti ọtụtụ wijetị nke Spotify, Play button, Soro bọtịnụ na Artist si peeji ndị kasị ewu ewu na omume. The kasị bara uru atụmatụ ọ bụla music ngwa bụ play / kwụsịtụ nke songs na N'ihi ya, Play button bụ nnọọ kemfe mmekọ. N'adịghị ka Play button wijetị, mmepe nke Soro button nwere ọtụtụ ebumnobi. Soro button bụghị nanị facilitated ahịa na-eme ndị ọrụ ha na-eso ha, kamakwa aided na ọha na eze, advertisement nke Spotify. Ezie na Artist si Page nwere ike na-eji abụọ ọkọlọtọ wijetị nke ozi kpọtara data site na Web APIs. Artist si Page eme a ọnwụnwa na na-na ọrụ bonded. Ịgụnye, ndị a niile atọ pụrụ enịm ke udi nke music akara wijetị.
N'iburu nke a wijetị na gị blog / website wdg na-eme ka ọ dị nnọọ mfe maka ọrụ na-egwu song remotely. Niile ha chọrọ ime bụ na a click. Play button nwere ike mere maka listi ọkpụkpọ, nka, albums ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ collection nke egwu. Kama ịmafe web / desktọọpụ ahịa n'ihi na egwu na-akpọ songs, ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ na-egwu ya ha site Play button wijetị. Nke a na-ekele site blog nwe dị ka ndị ọrụ na-adịghị mkpa na-ahapụ peeji na-ege ntị music. Wijetị na-arụ ọrụ na-esonụ n'ụzọ. Ka anya dị ka onye ọrụ clicks bọtịnụ, music amalite na-akpọ. Mgbe ke bụrụ na onye ọrụ na-abụghị aha na Spotify onye ọrụ isi, ma ọ bụ ite ke, ọ na-jụrụ ma nbanye ma ọ bụ banye na ibudata na ahịa, dabere n'elu dịruru ná njọ. Karịsịa, ndị programmer nke blog mkpa dee koodu n'ihi na nke a navigation, APIs-eme ka ọ niile kwere omume.
Ka dakọtara ọdịdị wijetị na anya na obi na-adị nke ibe weebụ, dị iche iche gburugburu dị. Otú ọ dị, Spotify na-eme adịghị enye ohere maka ihe ọ bụla customization na wijetị ma. N'ihi ya a onye ọrụ nwere ike ghara ịgbanwe ma ọ bụ na-agbanwe ihe imewe dị ka ya mkpa ya. Ọzọkwa, atụmatụ dị ka akpaaka play, ozugbo mmekọrịta, visibiliti nke starred tracks, shuffling nke songs ka bụ ndị na-adịghị na wijetị. Ndị nkatọ na-ekwu na mmepe-arụ ọrụ kwesịrị ihe ndị a ha ga-eweta a n'ụzọ zuru ezu kwajuru wijetị.
Kpọmkwem ihe mere n'azụ mmepe nke ndị na button bụ ka e wee web ọbịa na-eso blog nwe Spotify profaịlụ ma ọ bụ ihe ọ bụla akpan akpan Artist. Music freaks chọrọ ịkọrọ ha uto na ụwa na wijetị-eme ka ha mee otú ahụ. Soro na bọtịnụ na-kwadokwara site ulo oru na-achọ ịzụlite-eso ụzọ ha na-emecha dịkwuo ha ahia. Dị ka, ọ bụghị ọtụtụ ndị na-egosi mmasị na wụnye a ala ngwa ma ọ bụ na na ịnweta ozi site na desktọọpụ ahịa na ya mere na-eso button amama nanị ụzọ ịkọrọ gị profaịlụ na ndị. Ezie na akụkụ kasị mma bụ na ndị dị otú a bara uru bụ stof dị maka free. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ileta Spotify website, detuo iframe koodu na ịkụbanye ya na HTML koodu nke gị.
4.Creating Artist si Page
5.How na Tinye ndị a Wijetị ka nrụọrụ
Spotify mere ka ọ dị mfe ime ka ndị a wijetị na gị website site n'inye Koodu nke na-eme adịghị oku maka ihe ọ bụla mgbanwe. Ndị a Koodu na mmejuputa ụzọ ịdị iche iche dị ka nyiwe. Ọ bụrụ na, mgbe ị nwere ohere na HTML koodu nke page, niile ị chọrọ bụ ka Tapawa
> Resource> Spotify> Spotify Wijetị